उपचाररत चिकित्सक कुटिए : दुईजना पक्राउ, दुई फरार (भिडियो सहित) Global TV Nepal
ग्लोवल टि.भी. मङ्लबार, जेष्ठ ४, २०७८ 0
विराटनगर : मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिकास्थित विराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालका दुई चिकित्सक कुटिएका छन् ।
सोमबार राति ८ बजे विराटको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि चार जनाले कुटपिट गरेका हुन् ।
सोमबार राति पेट दुखेर बूढीगङ्गा–२ की ७३ वर्षीया गोमादेवी श्रेष्ठ उपचारका लागि भर्ना भएकी थिइन् । उनलाई अस्पताल लिएर आएका निश्चल र अनिलले चिकित्सकलाई गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरेको अस्पतालका संयोजक सुनिल देवले जानकारी दिए ।
उपचारमा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले आकस्मिक कक्षमा पसेर चिकित्सक डा. सुदीप रेग्मी र हेल्थ असिस्टेन्ट निर्दोष बस्नेतमाथि आक्रमण गरेको देवको भनाइ छ ।
रेग्मी र बस्नेत कोसी राजमार्गअन्तर्गत बूढीगङ्गा–३ मा भएको दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका दुई जनाको उपचारमा संलग्न थिए ।उनीहरूको उपचार गर्दैगरेका चिकित्सकलाई आक्रमण भएपछि गम्भीर अवस्थाका बिरामीले केही बेर उपचार नपाएको संयोजक देवले जानकारी दिए ।
आक्रमणबाट डा. रेग्मी र बस्नेतको टाउको, अनुहार र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ । घाइते अवस्थाका दुवै जनाको विराटमै उपचार भइरहेको छ ।
‘पेट दुखेर अस्पताल भर्ना भएका कारण वृद्धालाई हेर्न छोडे गम्भीर भएका घाइतेलाई हेर्दैगर्दा डाक्टरमाथि आक्रामण भएको हो’, देवले भने, ‘पाँच मिनेट ढिलाइ हुँदा आक्रमणको सामना गर्नुपरेको हो । ’
यता, डीएसपी मानबहादुर राईले कुटपिटमा संलग्न रहेका बूढीगङ्गा–२ का २८ वर्षीय निश्चल श्रेष्ठ र २५ वर्षीय अनिल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए । अन्य दुई जना फरार रहेका मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबार राति नै उनीहरू दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
दरबार हत्याकाण्डको २० औँ वर्ष पुरा
कोरोना नियन्त्रणका लागि कर्णालीले छुट्यायो एक अर्ब
बाँकेमा भोलिदेखि लकडाउन
अध्यादेशमार्फत बजेट आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली